I-generator kadizili isetha abakhiqizi izinkulungwane zezinkulungwane zamasethi akhiqiza udizili, izindlela zamadizili ezikhiqiza izindlela zokuthenga
A, abasebenzisi kufanele banake izingibe eziyisishiyagalombili lapho uthenga okungu-1 kudida ubudlelwano phakathi kwe-KVA ne-KW. I-KVA as KW ihaba ngamandla, ithengiselwa amakhasimende. Eqinisweni, i-KVA ngamandla abonakalayo, i-KW ingamandla asebenzayo, ubudlelwano phakathi kwabo IKVA = 0.8 KW. amayunithi angenisiwe ngokuvamile asebenzisa ...
Amaphampu omlilo kadizili afuna ukusebenza kahle, indawo yokufaka kufanele ikhethwe
Amapompo omlilo kadizili asetshenziswa kakhulu ezakhiweni eziphakeme, izinkampani zamanzi, izitshalo zensimbi, ama-distilleries, izitshalo zamakhemikhali, amahhotela, izibhedlela, namanye amaphrojekthi amakhulu okuphakelwa kwamanzi okuphuthumayo. Amaphampu omlilo kadizili afanele uhlelo lokuphakelwa kwamanzi oluphuthumayo olungagadiwe, umkhiqizo une-techno enhle ...
Amaphampu omlilo kadizili asebenza kakhulu? Zama lokhu
EXCALIBUR NEW PRODUCT- SELF PRIMING CAST IRON AMANZI AMAPOMPU NEVACUUM Equipment
Jiangsu Excalibur Amandla Machinery Co., Ltd. yasungulwa ngo-November 18
umlawuli ku 19-09-09
Excalibur has a standard workshop zanamuhla zokukhulekela 27000m2, 8 eziphambili ezizenzekelayo umhlangano line, iqinisekisa 1250sets izinjini okukhipha nsuku zonke. Sine amayunithi 51 dynamometer wokubacindezela, amayunithi 6 top-simo yasekhaya Eddy yamanje platform uzingela, futhi zonke izinhlobo Izikali ezivamile. Kungenxa yokuthi lezi up-to -...